29 June – Maalinta Caalamiga ah ee dhulka kulaala dhul-baraha dunida | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 29 June – Maalinta Caalamiga ah ee dhulka kulaala dhul-baraha dunida
29 June – Maalinta Caalamiga ah ee dhulka kulaala dhul-baraha dunida
Himilo – Sanad waliba 29 Juun waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee dhulka kulaala dhul-baraha dunida, waa maalin la xusuusto ahmiyadda uu leeyahay dhulkaan iyo mushkiladaha ay wajahayaan noolayaasha kala jaadka ah ee ku dhaqan.
Fadhi ay yeesheen Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay 14-kii Juun 2016-kii ayaa la asteeyay maalinta, kaddib soo jeedin ka timid macaahidda cilmi-baarta degaanka iyo noolayaasha ku nool-ba.
Indhaha caalamka ayaa lagu jeediyo horumaradda iyo dib u dhaca ka jira dhulkan oo loo tixgaliyo wadamada dhaca bartamaha dunida kuwaas oo isugu jira kuwa ku yaala shanta qaaradood; sida Africa, Asia, Yurub, Waqooyiga/ koofurta Ameerika iyo qeyb ka mid ah Australia.
Dhulkan wuxuu ku fadhiyaa ku dhawaad afartan boqolkiiba bedka guud ee dhulka, waxaana laga helaa 95% dhirta gaagaaban ee mangrove-ka, taasi oo faa’iidooyin u leh aadanaha sida inay u adeegsadaan degaanka si aysan u nabbaad guurin ciiddiisa.
Waxaa dhulkaan fadhiya in ka badan kala bar amaba 54% kheyraadka biyaha dib loo nadiifin karo, dadka ku nool’se waxaa la wariyaa inay u unugul yihiin biyo yari. cimilidiisu waa mid diiran, sanad waliba waxaa ka da’a roob badan.
Mushkiladaha uu wajahayo dhulkaan waxaa sidoo kale ka mid ah xaalufinta dhirta, deegaameyn si xawli ah ku socota, isbeddelka cimilada kuwaas oo dhammaantood saameyn taban ku yeeshay noolayaasha ku nool badda iyo bariga.
Si loo maamuuso dhulka ku meegaaran dhulbaraha waxaa maalintan oo kale la abaabulaa kulamo lagu wadaagayo sheekooyinka dhiilada leh ee laga soo uruuriyay degaanadaasi, iyada oo la dejiyo istaraatiijiyo/tabo lagu illaalinayo.
Waxaan sanadkan hal-ku-dheg loo qaatay iyada oo laga duulayo warbixinta dhulka kuleylaha 2021-ka “Dijitaalka ayaa kala dhantaalay dhulka kuleylaha”. si indhaha caalamka kale loogu soo jeediyo, dadka looga wacyigeliyo waxyeeleynta degaanka iyo noolayaasha kale.
Previous: Leicester City oo qeyb ka noqotay tartanka Domenico Berardi
Next: Keliya maahan messi: Xidigaha Arkaya Heshiisyadooda oo dhacaya Habeen badhka?